गर्भपतन चक्की प्रयोग गर्नु अघि
तपाईले गोली लिई गर्भपात गर्नुअघि पूर्ण रूपमा जानकार र तयार भएको महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्।
1. गर्भावस्था क्याल्कुलेटरको
2. ध्यान दिनु पर्ने कुरा
3. सामान्य सुझाब
4. सुरक्षा योजना निर्माण
तपाईंको महिनावारी यस मिति वा योभन्दा पछि सुरु भएको हो भने:
तपाईंले अझै पनि गर्भपतन गोली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
२०२२ मार्च २२
तपाईंसँग IUD छ भने
तपाईंलाई एच आई भी छ भने
तपाईं गोपनीयताबारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने
यदि तपाईं आफ्नो गर्भपातलाई सकेसम्म निजी राख्नबारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने गर्भपातको गोली योनीमा राख्नुको सट्टा जिब्रामुनि राख्नुहोस् यो चक्की प्रयोग गरिरहेको बेला नसोचेको कुनै गम्भीर समस्या आइ पर्योि र चिकित्सकीय सहयोग चाहियो भने योनीमा राखेको चक्की देखिन सक्छ। कतिपय मुलुकमा योनीमा यस्तो चक्की भेटिएमा तपाईँ विरुद्ध उजुर उजुर गरिन सक्छ।
तपाईं स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ भने
तपाईंलाई एनीमिया छ भने
तपाईँलाई रक्तअल्पता (रगतमा फलामको मात्रा कम हुने) छ भने आवश्यक परेको बेला आधा घण्टाभित्र सहयोग गर्न सक्ने स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई चिनि राख्नु होस्। तपाईँलाई ज्यादै रक्तअल्पता छ भने गर्भपाती चक्की प्रयोग गर्नु अघि डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस्।
मिसोप्रोस्टोल चक्की प्रयोग गर्दा आफ्नो घर वा यस्तै कुनै ठाउँमा बस्नुहोस् जुन ठाउँ गोप्य होस् र चाहेमा चक्की प्रयोग गरे पछि केही घण्टा पल्टन सकियोस्।
उमठेको पीडा कम गर्न मिसोप्रोस्टोल प्रयोग गर्नु अघि आइब्युप्रोफन लिन ध्यान दिनुहोस्।
गर्भपाती चक्की प्रयोग गर्नु अघि नै आकस्मिक चिकित्सकीय सहयोगको लागि सुरक्षा योजना बनाउनुहोस्।
सुरक्षा योजना निर्माण
अमेरिकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग कङ्ग्रेस (American Congress of Obstetricians and Gynecologists) का अनुसार पहिलो तिन महिनासम्मको औषधीय गर्भपतन सबै भन्दा सुरक्षित विधि मध्ये एक हो। यसो भए तापनि सम्भावित औषधीजन्य सङ्कटको लागि सधैँ तयार रहनु पर्छ। तपाईँलाई आवश्यक पर्न सक्ने सुरक्षा योजना बनाउन सहयोग गर्ने तलका प्रश्नमा ध्यान दिनुहोस्।
सबै भन्दा नजिकको चौबिसै घण्टा खुल्ने आकस्मिक स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ छ?
तपाईँ त्यहाँ १ घण्टा भित्र पुग्न सक्नु पर्छ। (तपाईँलाई रक्तअल्पता छ भने तपाईँ त्यहाँ आधा घण्टा भित्र पुग्न सक्नु पर्छ।)
आकस्मिक स्वास्थ्य केन्द्रमा तपाईँ कसरी जानुहुन्छ?
तपाईँसँग कोही छ जसले तपाईँलाई मोटरमा लैजान सक्छ? तपाईँले ट्याक्सी लिनुहुन्छ? सार्वजनिक सवारीमा जानुहुन्छ? कति भाडा लाग्छ अनि चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुन्छ? सम्झनुहोस्- औषधीजन्य सङ्कटको अवस्थामा आफैले गाडी चलाएर अस्पताल जानु सुरक्षित हुँदैन।
आफ्नो डाक्टरलाई के भन्नुहुन्छ?
तपाईँ बस्ने ठाउँमा औषधीय गर्भपतन वा घरमै गर्भपतन गर्न कानुनी प्रतिबन्ध छ? आफूलाई कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने कुरा डाक्टरले बुझ्ने र आफ्नो गोप्यता पनि कायमै रहने गरी उनीहरुलाई तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ? के भन्ने भन्ने बारेमा सोच्न तपाईँलाई सहयोग चाहिन्छ भने हामी केही सुझाउ दिन्छौँ।
आफ्नो डाक्टरसँग के भन्ने कतिपय मुलुकमा औषधीय गर्भपतन वा घरमै गर्भपतन गर्न कानुनी प्रतिबन्ध हुन्छ। यसको अर्थ तपाईँलाई आकस्मिक चिकित्सकीय सहयोग चाहिएमा के भन्ने भन्ने बारे सचेत हुनु पर्छ। औषधीय गर्भपतनका लक्षण ठ्याक्कै स्वाभाविक गर्भपतन (स्वतः गर्भपतन पनि भनिन्छ) का जस्ता हुन्छन्। त्यसैले तपाईँ यसो भन्न सक्नुहुन्छ:
के भयो मलाई थाहा छैन। भर्खर रक्तस्राव सुरु भयो।
रगत बगिरहेको छ तर यो सामान्य सक्तस्राव जस्तो लाग्दैन।
अचानक रगत बग्न थाल्यो, केही समस्या भए जस्तो लाग्छ।